Iingcebiso zokwenza i-Gmail ngokwezifiso kwaye ufumane okuninzi kuyo | Iindaba zeGajethi
Amaqhinga okwenza ngokwezifiso i-Gmail kwaye ufumane okuninzi kuyo
UIgnacio Sala | | Iikhompyuter, Tutorials
Inkonzo ye-imeyile kaGoogle, i-Gmail, yaqala uhambo lwayo kwintengiso ngo-Epreli 1, 2004, kodwa kwakungekho ngoJulayi 7, 2009, xa inkonzo ishiye i-beta kwaye bonke abasebenzisi abafuna, banokuvula iakhawunti ye-imeyile. Kwiminyaka emi-3 kamva yatyhila iMicrosoft (Outlook, Hotmail, Msn ...) njenge iqonga lemeyile elisetyenziswa kakhulu emhlabeni.
Inani labasebenzisi elinalo ngoku alaziwa, kodwa ukuba sithathela ingqalelo ukuze sikwazi ukusebenzisa i-smartphone ye-Android, kuyafuneka, ukuba okanye ukuba, iakhawunti kaGoogle, singafumana umbono wesilo esineGmail yiba. Esinye sezizathu zokuba amvumele hlala njengenkokheli yentengiso, siyifumana kwinani elikhulu lokwenza ngokwezifiso kunye nokusebenza okunokusinika kona.
Esinye isizathu, siyifumana ngokudityaniswa kwazo zonke iinkonzo zikaGoogle ezinje ngeGoogle Drayivu, iMisebenzi, uGoogle amaXwebhu, iiHangouts ... iinkonzo zasimahla ezikwasetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela. Nangona inani leenketho i-Gmail esinika lona ngokusetyenziswa kwezixhobo eziphathwayo libanzi kakhulu, apho sinokufumana okuninzi kuyo ikwinguqulelo yedesktop.
Le nguqulo yedesktop, esebenza ngokukuko kunye nesikhangeli seGoogle Chrome (yonke into isekhaya), isinika inani elikhulu lokukhetha, iinketho ezingafumanekiyo kwii -apps zeselfowuni, kodwa oko kunokuchaphazela ukusebenza kwesicelo kwezi zixhobo, njengokuhambisa ii-imeyile, ukwenziwa kweelebhile zokuhlela ii-imeyile esizifumanayo, kusetyenziswa imixholo yangasemva eyenzelwe wena ...
Ukuba ufuna ukwazi ifayile ye- Ezona ndlela zingcono ze-gmail Ukufumana okuninzi koku, ndiyakumema ukuba uqhubeke ufunda.
1 Guqula umfanekiso ongasemva
2 Ishedyuli yokuposa
3 Hlela ii-imeyile zakho ngeelebheli
4 Rhoxisa ukuthumela i-imeyile
5 Rhoxisa ubhaliso
6 Impendulo ezenzekelayo
7 Yongeza utyikityo lwesiko
8 Dlulisa ii-imeyile
9 Khulula isithuba seGmail
10 Ukuxinana komxholo
11 Ukulibazisa ukwazisa nge-imeyile
12 Vimba umthumeli
13 Sebenzisa i-Gmail ngaphandle kweintanethi
Guqula umfanekiso ongasemva
Ukutshintsha umfanekiso ongemva weakhawunti yethu ye-Gmail yinkqubo elula kakhulu esivumela ukuba siyinike touch eyahluke mpela kuleyo sayifumana ngokwasekhaya. Asinakusebenzisa kuphela eminye yemifanekiso osinike yona, kodwa sinokusebenzisa nawuphi na omnye umfanekiso esiwugcinileyo kwiqela lethu.
Ukutshintsha umfanekiso ongemva, kufuneka ucofe kwigiya levili elikwindawo ephezulu ye-Gmail kwaye ucofe ukhetho lwezihloko. Okulandelayo, yonke imifanekiso esinokuyisebenzisa ngasemva kwiakhawunti yethu iya kuboniswa. Apha ngezantsi, sifumana ukhetho lokufaka umfanekiso kwikhompyuter yethu ukuze siwusebenzise. Ukuba le yimeko yakho, kuya kufuneka ukhumbule ukuba isisombululo sefoto kufuneka silingane nokubekwa kweliso kwakho, ngokunjalo siya kuyithintela ukuba ingabonwa ngeepikseli njengezikhonkwane.
Ngaphambi kokudityaniswa kwendalo kokucwangciswa kwe-imeyile, sikwazile ukwenza oku ngokwandiswa okusebenza njengekhubalo. Nangona kunjalo, apho ubeka khona ukhetho ivumela ukuseta ukuthunyelwa kwe-imeyile ngokwemveli susa yonke enye into.
Ukucwangcisa ukuthunyelwa kwe-imeyile, kufuneka sibhale i-imeyile, yongeza umamkeli (okanye umntu) kwaye ucofe ku Utolo ezantsi luboniswe ecaleni kweqhosha Thumela ukukhetha usuku kunye nexesha esifuna ukuba i-imeyile yethu ithunyelwe ngalo.
Hlela ii-imeyile zakho ngeelebheli
Ukuququzelela ii-imeyile usebenzisa iilebheli yeyona nto ikufutshane ekudaleni izikhombisi kwikhompyuter ukulungiselela iifayile. Ngale ndlela, singadibanisa zonke ii-imeyile ezihambelana nomntu ofanayo ngaphakathi kwifolda ukuze sizifumane ngokulula. Iilebheli, ziboniswa kwicala lasekhohlo lesikrini, ngezantsi nje kokuFunyanwa, okuThunyelweyo, Okuhlehlisiweyo, Okubalulekileyo ...
Nje ukuba senze iilebheli, kufuneka senze Amacebo okucoca, ukuba asifuni ukuba sizihlele ngokwethu zonke ii-imeyile esizifumanayo. Enkosi kwezi zihluzo, zonke ii-imeyile esizifumanayo, ezingqinelana nenqobo esisunguleyo, baya kufumana ngokuzenzekelayo ilebheli esiyibekileyo.
Iikhrayitheriya esinokumisela zezi:
Nje ukuba simisele isihluzo, kufuneka simisele amanyathelo esifuna ukuwenza ngazo zonke ii-imeyile ezibandakanya ezo ndlela. Kule meko, sifuna ukongeza ithegi yeendaba zeGajethi. Ukusukela ngoku ukuya phambili, zombini ii-imeyile ebesele sizifumene kunye nezo sizifumanayo ukusukela ngoku, izakongeza ngokuzenzekelayo ithegi yeGajethi yeendaba.
Rhoxisa ukuthumela i-imeyile
Ukubhala i-imeyile eshushu akunakuze kulunge, kwaye kungaphantsi kakhulu ukuba siyinika ukuthumela kunye nemizuzwana kamva sicingisisa kwakhona. Ngethamsanqa, i-Gmail isinika amandla okurhoxisa ukuthumela i-imeyile ukuya kwimizuzwana engama-30 emva kokuba ithunyelwe. Emva kokuba ixesha lidlulile, akukho nto sinokuyenza ngaphandle kokuthandaza.
Ukuseta elona xesha lininzi esinokuthi sirhoxise ukuthunyelwa kwe-imeyile, kufuneka sicofe kwigiya ebekwe kwikona ephezulu ngasekunene kunye noseto lokufikelela. Ngaphakathi kwi-General tab, sijonga ukhetho Hlengisa ukuhambisa: Ixesha lokurhoxisa ukuhambisa: kunye setha ixesha elisusela kwimizuzwana emi-5 ukuya kwengama-30.
Nangona ngokomthetho, kunyanzelekile ukuba yonke imiyalezo ethunyelwe kakhulu, efana neeleta zeendaba, ibandakanye ukhetho lokuba ungabhalisi, ayizizo zonke ezibonisa olo khetho ngokucacileyo nangokucacileyo. Ukwenza kube lula kubo ukuba bayeke ukufumana ii-imeyile kwiinkonzo esingazifuniyo, i-Gmail iyasivumela ungabhalisi ngokuthe ngqo ngaphandle kokuyicela ngezinye iindlela.
Xa uceba ukuya eholideyini, okanye ukuthatha iintsuku ezimbalwa, kuyacetyiswa ukuba sisebenzise umatshini wokuphendula osinikwa yiGmail. Le nkonzo inoxanduva lokuphendula kuyo yonke imiyalezo esiyifumanayo ngombhalo esiwumisele ngaphambili, ukongeza isihloko kunye nexesha apho uGmail Siza kujongana nokuphendula ii-imeyile zethu.
Sikwanethuba lokuba umyalezo ophendulayo ozenzekelayo uthunyelwe kuphela kubafowunelwa esibagcinileyo kwiakhawunti yethu ye-Gmail, ukuthintela ukunika ulwazi olongezelelekileyo kubantu esinabo asinanxibelelwano rhoqo. Olu khetho lufumaneka ngokukhethwa kwe-Gmail kunye neCandelo eliqhelekileyo.
Yongeza utyikityo lwesiko
Ukutyikitya ii-imeyile akusivumeli nje kuphela ukuba sizazise kwaye sinikezele ngeenkcukacha zethu zonxibelelwano, kodwa ikwasivumela ukuba songeze amakhonkco ngokuthe ngqo kwezinye iindlela zokunxibelelana nathi. I-Gmail, iyasivumela yenza iisiginitsha ezahlukeneyo, utyikityo esinokuzisebenzisa zombini xa sisenza i-imeyile entsha okanye xa siphendula ii-imeyile esizifumanayo.
Xa usenza utyikityo, sinokongeza uphawu lwenkampani yethu, okanye nawuphina umfanekiso, njengalowo ubona kumfanekiso ongentla. Kanjalo sinokufomatha isicatshulwa ukuthanda kwethu zombini kwifonti, njengobungakanani bayo, ukulungiswa ... Olu khetho luyafumaneka kukhetho loqwalaselo lweGmail, ngaphakathi kwecandelo eliqhelekileyo.
Njengayo nayiphi na inkonzo ye-imeyile ehloniphayo, i-Gmail isivumela ukuba sithumele zonke ii-imeyile esizifumanayo kwenye iakhawunti ye-imeyile, okanye ii-imeyile kuphela ezihlangabezana nothotho lweekhrayitheriya. Ukuseka iikhrayitheriya, kukhetho lokuDlulisela phambili, kuya kufuneka ucofe ukwenza icebo lokucoca ulwelo kwaye simisele, njengakwilebheli, Indlela ekufuneka i-imeyile ihlangane ngayo ukuze ithunyelwe kwidilesi esiyifunayo.
Khulula isithuba seGmail
I-Gmail isinika i-15 GB yokugcina simahla kuzo zonke iinkonzo ezisinika zona ezinje ngeGmail, Google Drayivu, neefoto zikaGoogle ... I-Gmail yenye yeenkonzo ezithatha esona sithuba sikhulu. Ukukhulula indawo, singasebenzisa umyalelo "ubungakanani: 10mb" (ngaphandle kwezicatshulwa) kwibhokisi yokukhangela ukuze zonke ii-imeyile ezihlala ukuya kuthi ga kwi-10 MB ziboniswe. Ukuba endaweni yokubhala "ubungakanani: 20mb" (ngaphandle kweempawu zokucaphula) zonke ii-imeyile ezihlala ukuya kuthi ga kwi-20mb ziya kubonakala.
Ngokuzenzekelayo, uGoogle usinika umbono weakhawunti ye-imeyile ebonisa ukuba ii-imeyile zibandakanya naluphi na uhlobo lokuncamathisela kwaye luhlobo luni. Ukuba sifumana ii-imeyile ezininzi ngexesha losuku kwaye asifuni ukuba nesishwankathelo sazo zonke, sinako tshintsha uxinano lomxholo obonisiweyo. Olu khetho lufumaneka ngaphakathi kwecogwheel, kwicandelo loxinano loMxholo.
I-Gmail isinika iindlela ezintathu: Ukungagqibeki, Esibonisa ii-imeyile ngohlobo lokuncamathiselwa, Ukuthuthuzela, apho zonke ii-imeyile ziboniswa ngaphandle kweziqhotyoshelweyo kunye Icwecwe, Uyilo olufanayo nembonakalo yeCompact kodwa yonke into isondelelene, iyaqina.
Ukulibazisa ukwazisa nge-imeyile
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ufumene i-imeyile ekufuneka uphendule ngo-ewe okanye ewe, kodwa ayingxamiseki. Kule meko, ukunqanda ukuyilibala, sinokusebenzisa ukhetho lokuHlehlisa. Olu khetho, cima umyalezo we-imeyile kwibhokisi yethu engenayo (ebekwe kwitreyi emiselweyo) kunye iyakuboniswa kwakhona ngexesha kunye nasemini esiyimisileyo.
I-Gmail isinika iifilitha ezinamandla ukunqanda i-SPAM, nangona kunjalo, ngamanye amaxesha ayikwazi ukubona zonke ii-imeyile ngokuchanekileyo. Ukuba sidiniwe kukufumana ii-imeyile ezisoloko zivela kwidilesi enye ye-imeyile, i-Gmail ivumela ukuba siyibambe ngokuthe ngqo ukuze zonke ii-imeyile abazithumelayo zivele ngqo kudoti wethu. Ukuvimba umsebenzisi, kufuneka sivule i-imeyile kwaye ucofe amachaphaza amathathu athe nkqo ekupheleni kwedilesi ye-imeyile kwaye ukhethe ibhloko.
Sebenzisa i-Gmail ngaphandle kweintanethi
Ukuba sihlala sisebenza kunye nelaptop, kunokwenzeka ukuba ngamanye amaxesha emini, asiyi kufumana unxibelelwano lwe-intanethi. Kule meko singasebenzisa i-Gmail ngaphandle konxibelelwano lwe-intanethi, umsebenzi lowo ifumaneka kuphela xa sisebenzisa iGoogle Chrome. Olu khetho linoxanduva lokusivumela ukuba sikhangele ii-imeyile zamva nje kwaye siziphendule ngqo kwisikhangeli ngokungathi sinonxibelelwano lwe-intanethi. Ngokukhawuleza nje ukuba siqhagamshele kwi-intanethi, iya kuqhubeka nokuthumela ii-imeyile esizibhalileyo okanye esiziphendulayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Amaqhinga okwenza ngokwezifiso i-Gmail kwaye ufumane okuninzi kuyo
IAmazon iveza iFire HD 8 entsha ngexabiso lokhuphiswano